Emailvision Launch Email, Social na Ahịa ọgụgụ isi | Martech Zone
Emailvision Launch Email, Social na Ahịa ọgụgụ isi
Tuesday, October 25, 2011 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Laa azụ n'April, anyị kwupụtara nke ahụ Emailvision zụrụ SmartFOCUS. Ọ bụ ugbu a n'ọnwa Ọktọba na nsonaazụ nke njikọta a enweghị ihe ịtụnanya, na-ejikọ Email, ọgụgụ isi na ndị ahịa n'ime otu ngwọta. Emailvision ka eze mara ọkwa ntọhapụ nke Onye na-ahụ maka mkpọsa mkpọsa.
SmartFOCUS nwere ihe nkesa nke onye ahịa na ihe ngosi njirimara dị egwu yana nchekwa data nwere nke mere ka ọ dị mfe iwu ụlọ nkwakọba ihe data terabyte mana ọ dị mfe iberi ma belata ha n'otu oge - na otu ịdọrọ na dobe interface.
Tupu inweta SmartFOCUS, Emailvision zụrụ Ebumnuche Marketer - ihe ntanetị mgbasa ozi. Ọ na-egosi na ha jikọtara atụmatụ kachasị mma nke teknụzụ ọgụgụ isi na ndị ahịa na ntọhapụ ngwaahịa ha kachasị ọhụrụ, Onye na-ahụ maka mkpọsa mkpọsa. Okwu adịghị eme ya ikpe ziri ezi… ya mere, lee vidiyo ha gbakọtara:
Kedu nsogbu ụlọ ọrụ? Ọnọdụ ntanetị emeela data karịrị akarị, mana nnukwu esemokwu maka ụlọ ọrụ mgbasa ozi / ịzụ ahịa na-eme n'ezie ihe ọ bụla. Ratingmepụta ihe ọmụma sitere na data abụrụla akụ na ụba na-echekwa ihe ọmụma ndị ahịa na-enweta site na ịkwụ ụgwọ na ikikere ikike.
Kedu ka Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi Editionlọ Ọrụ Na-edozi Nsogbu A? Emailvision na-enye ndị ahịa ụzọ dị ọnụ ala iji gbanwee ngwa ngwa site na email ha, mkpọsa na mmekọrịta mmadụ na ibe ya ka ha nwee ọgụgụ isi. Site na ọgụgụ isi a, ha nwere ike ịkwalite ndị ahịa nke ọma ma nyekwuo ozi dị mkpa na ofufe. Ndị na-eme ihe nkiri ahụwo ịrị elu dị egwu na ntinye ego site na elu na ire ere naanị.
Kedụ ihe ndị ahịa beta kwuru? Ndị ahịa na mmemme nnwale beta na-akọ na ngwaahịa ahụ na-agba ọsọ usoro nyocha nde nde ndị ahịa iji chọpụta ohere site na ụbọchị ruo naanị sekọnd.
Kedu uru nke SaaS? Ọ bụ ezie na ọgụgụ isi ndị ahịa bara uru, n'oge gara aga ọ dịkwa oke ọnụ. Ngwọta on-premise gbara ihe ruru $ 1M ma were ọnwa iji mejuputa ya. O were ndị nyocha data iji ghọta nsonaazụ ya. Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi Enterprise Edition na-enye onye ọ bụla ohere iji anya nke uche ya hụ data ma soro usoro echiche ha ịzụlite ngalaba ọhụrụ enwere ike iji mee ihe ozugbo.
Kedu ihe kpatara ị ga - eji lebara Emailvision anya? Emailvision na-agafe oge oge mmụba na ihe ọhụrụ. Mgbe ha nwetara smartFOCUS na ObjectiveMarketer n’afọ a, ụlọ ọrụ ahụ nwere ọfịs na ndị ọrụ ọrụ ahịa na mba 19 ma na-eme mkpọsa n’ụwa niile. Ngwaahịa ọhụrụ ahụ na-enye ihe kachasị mkpa, ọkaibe na-achọ ntanetị mmekọrịta mmekọrịta n'ịntanetị iji bulie mkpa na uru nke mmemme mmemme ndị ahịa.
Ekele Nick, Charles na ndị otu na Emailvision! DK New Media so ndị otu na-arụ ọrụ n'oge ha nwetara SmartFOCUS na ọ bụ ihe na-akpali akpali ịhụ nke a n'ezie amamihe mgbanwe na njem. Debanye maka ngosi na Emailvision's Campaign ọchịagha Enterprise saịtị.
Tags: Ọchịagha Mgbasa OziOnye na-ahụ maka mkpọsa mkpọsanlele emailsmartfocus
Facebook bụ weebụsaịtị ọhụrụ
Pzọ iri abụọ na Generation Content Generation